नृत्यमा भविष्य खोज्दै पश्चिम नेपालका प्रतिभा, ‘मेरो नृत्यले मेरो परिवारलाई सबैले चिनुन’ – आकाश ठाकुर | PBM News.com
चितवन २३ जेठ । भनिन्छ हरेक व्यक्तिका आ–आफ्नै सपना र उद्देश्य हुन्छन् । कतिपय सपना र योजनाहरु पुरा हुन्छन कतिपय त्यसै खेर जान्छन् । यस्तै सपना देख्नेहरुको लाईनमा पश्चिम नेपालको आकाश ठाकुर पनि अग्रपंतीमा छन् । नेपालगञ्जमा जन्मिएका आकाश ठाकुर १८ वर्षका युवा हुन । अहिले एसईई परीक्षाको तयारीमा छन् । बुबा प्रमोद ठाकुर र आमा रेखा ठाकुरको दुईसन्तान मध्ये जेठाछोरा हुन । कान्छि बहिनी अध्ययरत्त छिन् । यिनलाई नृत्यमा निकै रुचि छ ।
नृत्य गरेरै आफु र आफ्नो परिवारको परिचय बनाउन चाहन्छन् । सोही अनुसार निरन्तर आफ्नो सपना पुरा गर्न सक्रिय बनेर लागेका छन् । सानैदेखि नृत्यमा रुचि भएपनि व्यवसायिक रुपमै नृत्य गर्नथालेको ७ वर्ष भयो । अहिले सम्म कुनैपनि क्लबमा सहभागी भएका छैनन् । सानो हुँदा स्थानीय नवराज सुवेदीले नृत्यगर्न सिकाउनुभयो उनले भने ‘ त्यसपछि जे गरें, म आफ्नै मेहनत र प्रयासले गरेको छु ’ । नेपागञ्जको करकान्टो वडा न. १८ मा बस्दै आएका आकाश ठाकुरलाई नृत्यक्षेत्रमै भविस्य बनाउनुछ ।
सगरमाथा इ.मो.स्कुलमा अध्ययरत्त ठाकुर स्कुलकै राम्रो नृत्यगर्ने विद्यार्थीमा पर्छन । स्कुलमा आयोजना हुने कार्यक्रम देखि गाउँघरमा हुने कुनैपनि खालका स्टेज कार्यक्रममा उनको प्रस्तुती अनिवार्य जस्तै हुन्छ । उसो त नेपागञ्जको सेरोफेरो देखि अन्य जिल्लामा समेत नृत्यका लागि पुगेका छन् । उनले धेरै डान्स शोहरुमा सहभागीता जनाएर राम्रो अनुभव संगाल्ने मौका पाएका छन् । पोखरामा आयोजना गरिएको नेपाल एवान स्टारमा टप १८ औ हुन सफल भए । देशभरका प्रतिस्पर्धीहरुलाई उछिन्दै टप १८ मा पुगे । नेपालगञ्ज्मै २०१९ मा आयोजना गरिएको नेपालगञ्ज ट्यालेन्ट हन्ट २०१९ मा तेश्रो भए । त्यस अघि नेपालगञ्जमै आयोजना भएको उडान नेपाल कम्पिटीसनमा दोश्रो भए । २०१९ मै आयोजना भएको स्कुल ट्यालेन्ट हन्टमा पनि दोश्रो हुन सफल भए । यो सँगै कयौं स्टेज कार्यक्रममा उनलाई अफर आउने गरेको छ । ‘मैले अझै धेरै मेहनत गर्नुछ उनले भने – नृत्य गरेरै मेरो र परिवारको सपना पुरा गर्नुछ ।
आकाश मधेसी समुदायका आशलाग्दो प्रतिभा हुन । नेपाली कल्चरल नृत्यमा बढी रुचि राख्ने आकाशले सबैखालका नृत्यमा राम्रो दख्खल राख्छन् । हिपपप, मोर्डन कल्चरल देखि क्लासिकल र आधुनिक नृत्यमा यिनले राम्रै अभ्यास गरेका छन् । आकाशका बुबा प्रमोद ठाकुर सशस्त्र प्रहरी वलमा कार्यरत्त छन् । त्यहाँ उनले स्टापहरुको कपाल काट्ने गर्छन । म र बहिनी आमालाई घरको काममा सघाउँछौं आकाशले सुनाए । मलाई मेरो बुबा र आमाको राम्रो साथ छ । मधेसी समुदायबाट मेरो छोरा राम्रो कलाकार बनोस भन्ने बुबाको सपना छ आकाशले थपे । बुबाले ममा धेरै ठूलो सपना देख्नुभएको छ । म बुबाको सपना पुरा गर्ने दौडानमा छु ।
म चान्छु मेरो नृत्यले मेरो परिवारलाई सबै नेपालीले चिनुन । उसो त आकाश राम्रो प्रतिभा भएर पनि अझै राम्रो प्रशिक्षण पाउन सकेका छैनन् । शहर केन्द्रीत प्रतिभाको खोजी गाउँ सम्म पुग्ने वा गाउँका प्रतिभाहरु शहर सम्म पुग्ने अवसर पाएको भए आकाश जस्तै धेरै गाउँघरमा लुकेर बसेका प्रतिभाहरुलाई संसारले चिन्ने मौका पाउने थिए । आकाशको सपना पुरा होस हाम्रो पनि शुभकामना ।
आकाश ठाकुरले गरेको नृत्य भिडियो हेर्नुहोस –
नृत्यमा भविस्य खोज्दै पश्चिम नेपालका प्रतिभा, मेरो नृत्यले मेरो परिवारलाई सबैले चिनुन – आकाश ठाकुर
Gepostet von Prime Broadcasting Media pvt am Freitag, 5. Juni 2020